Nhau - Iyo inoshanda musimboti yemagetsi vharuvhu bhora
Iyo yemagetsi bhora vharuvhu ine chiito chekutenderera 90 degrees. Mutumbi wejongwe idenderedzwa rine denderedzwa nepaburi kana mugero unopfuura nepakati payo axis. Iyo vharuvhu yebhora inonyanya kushandiswa mupombi sevhavha yemagetsi kubhaiza, kugovera nekushandura mafambiro ekufamba kwepakati. Izvo zvinongoda kutenderera madigiri makumi mapfumbamwe nediki torque kuti uvhare zvine mutsindo. Iyo vharuvhu yebhora inonyanya kukodzera kushandiswa se switch uye yekuvhara-vharuvhu. Iyo budiriro yakagadzira vharuvhu yebhora kupwanya uye kudzora kuyerera, senge V-yakaita bhora vharuvhu. Huru hunhu hwemagetsi vharuvhu vharuvhu ndeyayo compact dhizaini, yakavimbika chisimbiso, yakapusa chimiro uye nyore kugadzirisa. Iyo yekuisa chisimbiso pamusoro uye iyo idenderedzwa pamusoro kazhinji iri mune yakavharwa mamiriro, izvo zvisiri nyore kubviswa neiyo yepakati. Zviri nyore kushanda uye kuchengetedza. Iyo inokodzera mvura, solvents, acids uye gasi rechisikigo. Iyo yekushanda svikiro inokodzerawo iyo yepakati ine yakaoma kushanda mamiriro, senge oxygen, hydrogen peroxide, methane uye ethylene, nezvimwewo, izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana siyana. Mutumbi wevharuvhu yebhora unogona kuve wakasangana kana wakasanganiswa.
Iyo yemagetsi bhora vharafu mubatanidzwa wepulagi-yerudzi bhora vharafu uye yemagetsi actuator. Bhora vharuvhu yemuviri dhizaini isipo inotenderera madhigirii makumi mapfumbamwe. Iyo yemagetsi actuator inopinza yakajairwa chiratidzo che 0-10 mA. Iyo mota mota inotyaira iyo giya nehonye giya angle torque. Chinja vharuvhu ine switch bhokisi. Kushandiswa kwaro kunonyanya kugadzirwa nehuwandu hwezvinoitika nekugadzirisa mashandiro.
Anowanzo shandiswa emagetsi maekiseta anosanganisira akawanda-kutendeuka, kamwe-kutendeuka, akangwara, quarter-turn actuator, mutsara-sitiroko emagetsi maactuator, kuputika-proof actuator, uye madiki-saizi maactuator. Iwo mavharuvhu ebhora anonyanya kusanganisira mavharuvhu ebhora akayangarara, mavharuvhu akagadzika, O-akaumbwa mabhora mavharuvhu, V-akaumbwa mavharuvhu ebhora, uye matatu-nzira bhora mavharuvhu. Kuitwa uye bhora vharuvhu kumisikidzwa pamwe kunogona kuburitsa zvakasiyana zvigadzirwa. Iwe unogona zvakare kuwedzera bhokisi rekutonga kweiri kure oparesheni, uye wedzera zvimwe zvishongedzo kuactuator kuti uwane mamwe mashandiro ekushanda, senge kuwedzera chigadziriso chemagetsi kugadzirisa kuyerera, uye kuramba / ikozvino vharuvhu chinzvimbo chinoshandura chinogona kushandiswa kudzora mavhavha. Chiratidziro uye kutonga kwenzvimbo kuvhura, ruoko vhiri michina inogona kuvhiyiwa nemaoko kana pasina zvazvino, uye zvimwe zvinowanzo shandiswa zvishongedzo zvinosanganisira kuputira maoko, kuputika-chiratidzo mafambiro switch, nezvimwe. Chisarudzo chekutanga chinogona kusarudzwa zvinoenderana nemamiriro ekushanda. .
Magetsi mavhavha ebhora maakaunzi ave kushandiswa zvakanyanya mumafuta, gasi rechisikigo, mushonga, chikafu, magetsi emagetsi, simba renyukireya, magetsi, kupihwa mvura nemadhiraini, kudziyisa, simbi uye mamwe maindasitiri, uye iwo akakosha michina zvigadzirwa zvekudzivirira kwenyika kuvaka. Ichowo chigadzirwa chakakosha pakuvaka tekinoroji. Iyo inobata yakawanda yemugove wemusika, kunyanya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana senge rakasimba basa, diki saizi, kuita kwakavimbika, hukuru hwekuparadzira kugona, vanhu vakareruka uye vasina mutengo, uye kure kure kudzora magetsi emagetsi emagetsi. Magetsi mavharuvhu emagetsi haasi ekungopopota, kuvhara, kucheka, nezvimwewo Chinhu chakanaka chekushandisa-uye kutsausa, kana chigadzirwa chinotyisa chesarudzo mune kuyerera mutemo system. Iyo ine akawanda maitiro akadai sekumanikidza kuramba, kupisa tembiricha, ngura kuramba, yakaderera kuyerera kuramba, hupenyu hwakareba sevhisi, uye yakafara application renji.